Lego အသစ် Star Wars Razor Crest သည် ၂၀၂၂ တွင်ဖြန့်ချိမည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်
Lego အသစ် Star Wars Razor Crest သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက်သတင်းထွက်ခဲ့သည်
07 / 09 / 2021 07 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 616 Views စာ0မှတ်ချက် 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Tatooine အပေါ် 75299 ပြTroနာ, 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, 75315 Imperial အလင်း Cruiser, 75319 The Armorer's Mandalorian Forge, Lego, Lego ကောလာဟလများ, Lego Star Wars, ကောလာဟလာ, Star Wars, Star Warsဖြေ, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါ Mandalorian, သင်တုန်းမောက်
Razor Crest ၏ ဗားရှင်းအသစ်သည် ၎င်းတွင် ပါဝင်လာနိုင်သည်။ Lego Star Wars ၂၀၂၂ တွင် line-up သည်၎င်းထက်များစွာသေးငယ်သည် 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး.
Instagram သုံးစွဲသူ lego_club_news Din Djarin ၏သဘောင်္သည်နောက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသတင်းများကဖော်ပြသည် Star Wars ၇၅၃၂၁ Razor Crest Microfighter ၌ chibi ကုသမှုကိုရယူရန်ယာဉ် ၎င်းသည် The Mandalorian ၏ဒုတိယရာသီ၌မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်တိုင် spoiler alert ဖြစ်သောကြောင့်အနည်းဆုံးဤအချိန်၌ကြာရှည်သည်ဟုခံစားရသော set တစ်ခုဖြစ်သည်။
တူညီသောသတင်းရပ်ကွက်အဆိုအရဒေါ်လာ ၉.၉၉ တန်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်စတင်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ပြီး Beskar Mando minifigure တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ မှန်လျှင် ၇၅၃၂၁ Razor Crest Microfighter သည်ဇာတ်ကောင်၏အသေးစိတ်ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းရန်ပဉ္စမမြောက်အစုဖြစ်လိမ့်မည်။ Tatooine အပေါ် 75299 ပြTroနာ, 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, 75315 Imperial အလင်း Cruiser နှင့် 75319 The Armorer's Mandalorian Forge.
၇၅၃၂၁ Razor Crest Microfighter နှင့် 75320 Hoth Battle Pack ဟုသတင်းထွက်ခဲ့သည်ငါတို့က start၎င်းမှမျှော်လင့်သောအရာကိုပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားသောပုံရိပ်တစ်ခုရရှိရန်ရယူပါ Lego Star Wars ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်ဆောင်ပုဒ် Lego Group မှ။
← တစ်နေ့တာရဲ့အုတ်ပုံ - မင်း Robin ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။
LEGO Seasonal 40499 Santa's Sleigh ၏နောက်ထပ်ပုံများ →